काँग्रेस हार्दै गर्दा जितेका देउवा
विजयादशमीको शुभसाइत बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटमा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका परिणाम धमाधम आइरहेका छन् । प्रारम्भिक परिणामले वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिलाउने अनुमान गर्न कठिन छैन । प्रतिपक्षमा रहने नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा हुने उपस्थिति कमजोर देखा पर्दैछ । प्रदेश नम्बर २ मा बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा वाम गठबन्धनबाहेकको सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेश २ मा सङ्घीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नेपाली काँग्रेसको तालमेलको सरकार बन्न सक्छ र त्यहाँ वाम गठबन्धन कमजोर प्रतिपक्ष बन्ने देखिन्छ तर अरू प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बाहुल्य हुने र उनीहरूकै प्रदेश सरकार बन्ने देखिन्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन मुलुकलाई कम्युनिष्टमय बनाउन यसपटक सफल भएका छन् ।
काँग्रेसले पार्टीको सङ्गठनका हिसाबले ६० को हाराहारीमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी बन्ने आकांक्षा राखेको थियो । कम्तीमा ४० सिट आउने अनुमान प्रतिपक्षीले पनि गरेका थिए, तर परिणाम ३० सिट पुग्न पनि कठिन देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको यो परिणामले काँग्रेसजनलाई निरुत्साहित गर्नु स्वाभाविक हो तर समग्रमा काँग्रेसको मत घटेको छैन । शनिवार साँझसम्मको ३५ सीटको घोषित परिणाममा काँग्रेस पाँच सिट जित्न सफल हुँदा पाँच सिटमा ४७ देखि ४४० मतको अन्तरमा पराजित भएको छ । मुगुमा मङ्गलबहादुर शाही स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामासँग ४७ मतले पराजित भए । यसरी नै मनाङमा १७९, मुस्ताङमा २६३, काठमाडाँै– ८ मा ३५४ र धादिङ– २ मा ४४० मतको अन्तरमा हारजित भयो । अब आउने कति सिटमा काँग्रेस झिनो मतमा पराजित होला, त्यसका लागि परिणाम कुर्नुपर्ने छ । तर अहिलेको स्थितिमा काँग्रेसका लागि पाँच सिट गुमाउनु थोरै होइन ।
काँग्रेसले प्रत्यक्षमा हार बेहोरी रहँदा धेरैजसो दुई हजारदेखि पाँच हजार मतको अन्तर देखापरेको छ । कम्तीमा १४० सिटमा यो अवस्था हुन सक्छ । वाम गठबन्धनसँगको ठूलो मत अन्तर अपवादका रूपमा दोलखा, धादिङ– १ र ताप्लेजुङ देखिएका छन् । दोलखामा लगभग ३० हजार, धादिङमा २७ हजार र ताप्लेजुङमा १३ हजार मतको अन्तरमा काँग्रेस पराजित भएको छ । यही प्रवृत्तिमा समानुपातिकमा पनि एमाले र माओवादीले मत ल्याउने हो भने काँग्रेसभन्दा तीनदेखि चार लाख मात्र बढी हो भन्ने सङ्केत गर्छ । कुल मतमा वाम गठबन्धन काँगे्रसभन्दा चार लाख मत बढी ल्याउनु भनेको समानुपातिकमा वाम गठबन्धन ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने हो तर यो सम्भावना अझ किन कम छ भने एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशत भागबण्डा गर्दा आफ्ना उम्मेदवार नभएका ठाउँमा मत दिन जानेहरूको सङ्ख्या घट्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यसको अर्थ काँग्रेस र वाम गठबन्धनले समानुपातिकमा बराबरी सिट बाँड्न सक्छन् । यसको अर्थ काँग्रेसले ४० देखि ४५ सदस्य समानुपातिकमा पाउने देखिन्छ । मधेश केन्द्रित दुई दल सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको हैसियत पनि प्रत्यक्षमा २० सिट आउने देखिन्छ । दुवैका पाँच–पाँच सदस्य मात्रै समानुपातिकमा आए भने पनि यी दुई पार्टीका कम्तीमा ३० सांसद हुनेछन् । यसरी लगभग ४० प्रतिशतको प्रतिपक्ष संसद्मा उपस्थित हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा ६० र ४० को सन्तुलनलाई कमजोर मान्न मिल्दैन । यद्यपि, वाम गठबन्धनका महìवाकांक्षा संसद्मा मात्र सीमित छैनन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई जनवाद उन्मुख बनाउने चाहना मूर्त हुन संसद्मा वाम गठबन्धनको उपस्थिति पर्याप्त हुने छैन । तर प्रदेश नम्बर २ मा पहिचान जोगाउन कठिन बनेको एमालेले मधेशलाई कसरी हेर्ने छ ? मधेशका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको माओवादी र माधेशीका माग मुलुकमा विखण्डन ल्याउने हुन् भन्ने एमालेले संविधान संशोधनलाई कुन रूपमा हेर्ने छन् ? यो नै नयाँ बन्ने सरकारको चुनौतीको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना र पचास वर्षसम्म कम्युनिष्टको शासन चलाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आकांक्षाको यात्रा कसरी अघि बढ्ने हो ? यो अहिले अनुमानको विषय मात्र हो ।
यो निर्वाचनले नेपालमा कम्युनिष्टलाई बलियो बनाएको छ । कम्युनिष्टले मात्रै सक्षम सरकार दिन्छन् भन्ने दाबीका आधारमा वाम गठबन्धन यो मत पाउन सफल भएको छ । नेपालमा पनि कम्युनिष्ट सरकार नयाँ अभ्यास होइन । २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारीको एमाले सरकार पहिलो कम्युनिष्ट सरकार थियो । उसबेला शुरु गरेको वृद्धभत्ता (हालको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता) को व्यवस्थालाई देखाएर एमालेले आज पर्यन्त चुनाव लडेको छ । २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलन पछिका ११ वर्षमा आधाभन्दा बढी समय कम्युनिष्ट नेतृत्वकै सरकार रह्यो । अझ एमाले त दोस्रोपटकको प्रचण्ड सरकारका ३०० दिन र शेरबहादुरको अहिलेको १८४ दिनबाहेक कहिल्यै सरकारबाट बाहिर रहेन अर्थात् ११ वर्षमा लगभग नौ वर्ष एमाले सत्तामा नै रह्यो । माधव नेपालका ६२२ दिन, झलनाथका २०४ दिन र केपी ओलीका २९७ लिन जोड्दा हुन आउने ११२३ दिन अर्थात् तीन वर्षभन्दा बढी त एमाले नेतृत्वकै सरकार थियो । प्रचण्डका २८० र ३०० दिन र बाबुरामका ५६३ दिन जोड्दा हुने ११४३ दिन पनि तीन वर्षभन्दा लामो समय माओवादीले खाएकै हो । अर्थात् पछिल्ला ११ वर्षमा छ वर्षभन्दा बढी कम्युनिष्ट सरकार नै चलेको थियो । अहिलेको अन्तर यति मात्रै हो, दुईथरी कम्युनिष्ट एक भएका छन् र मुलुकलाई विकास र स्थायित्व दिने घोषणा गरेका छन् । माओवादी आफैँ फुटेर आधा दर्जनभन्दा बढी पार्टी बनेको अवस्थामा कम्युनिष्ट जुट्न पनि सक्छन् भन्ने सन्देश दिने प्रयत्न भएको छ ।
काँग्रेसले निर्वाचनमा ल्याएको मतको प्रवृत्ति हेर्दा काँग्रेस कमजोर भएको होइन । यो परिणाम स्थानीय तहको निर्वाचनका पहिलो र तेस्रो ठूला दल मिलेका कारण देखापरेको हो । काँग्रेसको मत २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाहेक सरदर ३५ प्रतिशत हो । यो पटकको निर्वाचनमा पनि काँग्रेसले प्राप्त गर्ने मत यसकै हाराहारीमा हुने निश्चित छ । अझ समानुपातिकमा यो भन्दा बढी मत आउन सक्छ । यसपटकको काँग्रेसको हार संसद्मा सङ्ख्यामा भएको हार हो । यसले काँग्रेसमा कत्तिको साङ्गठनिक दायित्ववोध हुन्छ, त्यो अर्को पक्ष हो । नेतृत्वलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरीमा कहिल्यै विश्लेषण नगर्ने काँग्रेसको चरित्र फेरि पनि दोहोरियो भने अन्यथा हुने छैन ।
काँग्रेसको यो हारका केही कारण थिए भने पहिलो त उम्मेदवारी चयनमा भएको कमजोरी हो । हरेक गुटका नेताले आफू र आफ्नालाई उम्मेदवार बनाउन चाहे । पुरानो पुस्ता पाँचौंपटकसम्म पनि चुनावमा होमिन तयार भयो । उम्मेदवारको लोकप्रियतालाई विल्कुल ध्यान दिइएन । कम्युनिष्ट एकताले काँग्रेसलाई आधा त एकजुट बनायो तर आधाचाहिँ काँग्रेसभित्रकै अर्को पक्षलाई सिध्याउन वा निस्तेज बनाउन सक्रिय रह्यो । कतिले खुलेर यो भूमिका निर्वाह गरे, कतिले लुकिछिपी गरे । अधिकांश ठाउँमा टिकट नपाएका नाममा निष्क्रिय बस्ने सक्रिय नेताहरू देखिए । कतिले पुुरानो बदला लिने अवसर पनि यही निर्वाचनमा पाए । एक भएका कम्युुनिष्टसँग मुकाविला गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम काँग्रेसले फेला पारेन । कम्युनिष्ट अधिनायकवादको खतरा त काँग्रेसले देखायो तर सत्तामा रहेका कम्युनिष्टभन्दा सत्ताबाहिर रहेका कम्युनिष्ट बढी खतरनाक हुने अनुभव भोगेका नेपाली मतदाताले काँग्रेसको भनाइमा धेरै विश्वास गरेको पाइएन । काँग्रेस नेतृत्वले मूल मन्त्र बनाएको अधिनायकवादको कतिपय काँग्रेसीले आफैँ प्रतिवाद गरे ।
रणनीतिक रूपमा खेल्न सकिने ठाउँ काँग्रेससँग थियो । एमाले र माओवादीका अन्तरविरोधमा काँग्रेसले खेल्ने प्रयत्न नै गरेन । पार्टी सङ्गठन शेरबहादुर देउवामा केन्द्रित रह्यो । उनले जानेर वा नजानेर जति गरे, त्योभन्दा बढी रणनीति बनाउने टिम काँग्रेसमा देखिएन । हिजो अवसर पाएका काँग्रेस बुद्धिजीवी भनिनेहरू सकभर काँग्रेसमा देखा पर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा रहे । चुनाव परिचालन र चुनाव प्रचार समितिमा रहेका आफैँ सक्रिय भएनन् । बोलाए आइदिने अन्यथा देखै नपर्ने परिचालन र प्रचार सदस्यबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेन । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अति आत्मविश्वासले काम ग¥यो । उदाहरणका लागि मोरङको क्षेत्र नम्बर ४ सबैभन्दा सुरक्षित भनियो । महेश आचार्यको विजयमा कसैले थोरै पनि शङ्काको नजर लगाएन । डा. शेखर कोइरालाको बरु प्रतिस्पर्धा ज्यादा होला भन्ने थियो । डा. मिनेन्द्र रिजालको कडा प्रतिस्पर्धा छ भनियो तर परिणाम उल्टो आयो । महेश आचार्य झण्डै सात हजार मतको अन्तरमा हारे । डा. शेखरको पराजय सात सय मतले भयो । डा. मिनेन्द्रले दुई हजारभन्दा बढी मतको अन्तरमा जिते । जित्न असम्भव ठानिएको डा. सुनिल शर्माको क्षेत्रमा बरु दुई हजार मतको मात्र अन्तर रह्यो ।
काँग्रेसले यो चुनावमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बलियो बनाउन सकेन । दुई राप्रपालाई जोडेर लोकतान्त्रिक बनेको गठबन्धनमा जोड्नै पर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम बाहिर रहे । राजपाको महन्थ ठाकुर र फोरमका उपेन्द्र गच्छदार र अशोक राईलाई गरिएको समर्थनले खासै परिणाम दिएन । राप्रपासँग गठबन्धन गरिरहँदा अधिकांश ठाउँमा संयुक्त प्रचार समिति समेत बनेनन् । आफ्ना उम्मेदवार नहुँदा गठबन्धनमा रहेको राप्रपाका कार्यकर्ताले के आधारमा काँग्रेसलाई मत दिए होलान् ?
नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा शेरबहादुर देउवामाथि असफल भएको आरोप लाग्न सक्छ तर शेरबहादुरको सफलता संविधानलाई संस्थागत गर्नु हो भन्ने धेरैले बर्सेका छन् । आफ्नो पार्टीको हार देख्दादेख्दै लोकतन्त्रको जितका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचन गराउन सक्नु सानो साहसले पुग्ने थिएन । देउवाले यो गरेर देखाए । चुनावमा हारजित स्वाभाविक हो । तर एक माघले जाडो जाँदैन । चुनावलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिएर भोलिका लागि सङ्गठन गर्ने अवसर काँग्रेसले पाएको छ । अब काँग्रेसले सम्भावित सत्ता राजनीतिलाई छाडेर सङ्गठन अभियान चलाउन जरुरी छ । अनुशासनहीन कार्यकर्ताको संरक्षण अब जरुरी छैन । लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई साँच्चै एकत्रित गर्ने अभियान अब शुरु गर्नुपर्छ र पार्टीका संरचनालाई सबै अटाउने गरी पूर्णता दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति २०७४/८/२५